Super Computer Oo Lagu Saadaaliyay Kulamada Furitaanka Premier League Ka Hor Inta Aan Jadwalka Isku Aadka Barri La Soo Saarin. - Gool24.Net
Super Computer Oo Lagu Saadaaliyay Kulamada Furitaanka Premier League Ka Hor Inta Aan Jadwalka Isku Aadka Barri La Soo Saarin.
Isku aadka jadwalka kulamada premier league ee xili ciyaareedka cusub ee 2019/2020 ayaa loo balansan yahay barri oo khamiis ah markaas oo ay koox kasta oo ka mid ah 20 ka kooxood ee Premier league ay xisaabta ku darsan doonaan hawl galkooda xili ciyaareedka cusub.
Laakiin inta aan barri la soo saarin jadalka isku aadka Premier league, waxaa saadaal lagu sameeyay Super Computer kaas oo sanadihii ugu danbeeyay noqday aalad loo adeegsado saadaasha kubbada cagta.
Isku aadka jadwalka kulamada premier league oo ee sida sirta ah loo sii helay.
Inkasta oo baraha bulshada la soo galiyay sawir xambaarsan xogta kulamada furitaanka Premier league ee xili ciyaareedka cusubi sida ay noqon doonaan, haddana barri oo khamiis ah ayuu maamulka Premier league si rasmi ah u shaacin doonaa jadal ciyaareedka premier league.
Haddaba waxaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa saadaasha kulamada furitaanka ee Super Computer lagu sameeyay.
Aan ku bilawnee saadaasha Super Computer ee kulamada furitaanka premier league waxa uu kooxda Chelsea u saadaaliyay in ay Stamford Bridge ay ugu bilaaban doonaan xili ciyaareedkan cusub oo ay Aston Villla oo heerka labaad ka soo dalacday ay soo dhawayn doonaan.
Liverpool waxaa loo saadaaliyay in ay Anfield ku qaabili doonto kooxda Leicester City iyada oo waliba la ogyahay in Reds ayna xili ciyaareedkii dhaamaaday oo idil hal guuldaro ahi ku soo gaadhin garoonkeeda.
Super Computer waxa uu Manchester City u saadaaliyay in ay Etihad Stadium ku qaabili doonaan kooxda West Ham United maalinta furitaanka xili ciyaareedka cusub.
Manchester United ayaa loo saadaaliyay in ay maalinta furitaanka premier league marti u noqon doonaan kooxda Newcastle United halka Tottenham ay ku noqotay kooxda nasiibka ugu xun saadaashan ka heshay ee Everton maalinta furitaanka la ciyaari karta.
Saadaasha Super Computer Ee Kulamada Furitaanka Premier League
Haddaba akhirste, adigu ma saadaalin kartaa sida uu isku aadka maalinta furitaanka premier league uu noqon karo?